Booliska: Qabiilo Soomaali ah oo ku dagaalamay Sweden - iftineducation.com
Booliska: Qabiilo Soomaali ah oo ku dagaalamay Sweden
iftineducation.com – Booliska Sweden ayaa sheegay in ay aaminsanyihiin in dagaal dhex maray Soomaali ku nool tuulada Virserum ee ka tirsan gobolka Kalmar uu salka ku hayo qilaaf qabiil oo u dhexeeya Soomaalida. Booliska ayaa soo xiray labo nin oo lagu haysto in ay si xun u jirdileen nin kale, kaasoo loo qaaday hosbitaalka. Booliska ayaa sheegay in ay aaminsanyihiin in arintaan ay ka dambayso dagaal u dhexeeyo qabiilo Soomaali ah, sida uu qoray wargeyska Höglandsnytt.
“Wali ma hubno balse waxaan ka shaki qabnaa in arintaan ay lug ku leedahay dagaal qabiil” ayuu yiri Peter Karlsson oo ka tirsan ciidanka booliska.
Qilaafaadka ku dhisan qabyaalada ayaan ku cusbayn Sweden, iyadoo Soomaalida wadankaan ku nool aad moodo in ayba ka sii dareen markii ay Yurub yimaadeen oo qabyaalada iyo xumaanta ku salaysan qabiilka ay tahay mid xad dhaaf ah. Soomaalida ayaa xitaa waxay gaareen heer ay jaaliyadaha, shirkadaha iyo magaalooyinka ay degaan ay ku saleeyaan qabiilkooda.
Sidee u aragtaa saamaynta qabiilka iyo Soomaalida Sweden?
Gaalada oo maanta u dabaal dagay in dhar la aan lagu wareego magaalada mucjiso